Xildhibaan Jeesow oo sheegay lix bilood ka hor in Saalax Badbaado uu ku soo weeraray Gobolka Hiiraan.. | shumis.net
Home » alshabaab » News » Xildhibaan Jeesow oo sheegay lix bilood ka hor in Saalax Badbaado uu ku soo weeraray Gobolka Hiiraan..
Xildhibaan Jeesow oo sheegay lix bilood ka hor in Saalax Badbaado uu ku soo weeraray Gobolka Hiiraan..
Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo ka mid ah Xildhibaanada Baarlamaanka Somaliya, ayaa sheegay in Saalax Nuux Ismaaciil (Saalax Badbaado) uu lix bilood ka hor ku soo weeraray Gobolka Hiiraan.
Waxaa u sheegay weerarkaasi in uu dhacay xilli isaga iyo Xildhibaan Maxamed Maxamuud Goodir ay guubaabin la xiriirta Ciidamada Huwanta u taggeen Deegaanka Ceel Cale, oo laga saaray Al Shabaab.
Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow, ayaa yiri “Lix bilood ka hor mar Degmada Ceel Cali la qabtay waxaa tagey aniga iyo Xildhibaan la yiraahdo Maxamed Maxamuud Goodir. Saalax Badbaado wuxuu ka mid ahaa Saraakiishii Al Shabaab ee nagu soo weeraray meesha. Teleefan ayuu ii soo diray, wuxuu yiri murtadkii Daahir ahaayow maanta inaan ku dilaan rabay, laakiin nasiib wanaag waad iga guuleysatay, maalin kaloo aad iga guuleysan doonin ayaa badan, ayuu igu yiri Saalax Badbaado.”
Xildhibaan Jeesow oo laga maqlaayay Warbaahinta, ayaa tilmaamay in maalintaasi ay dagaal adag la galeen maleeshiyada Al Shabaab, isla-markaana ay ka saareen buuro uu sheegay inay ka dagaalamayeen.
“Maalintaas lix nin ayaan ka dilnay, anagana hal nin ayay naga dileen, si dhab ah ayaa dagaalkaas u galnay, way ku jubeen, waana ka saarnay buurihii ay saarnaayeen. Ceel Cali Sarkaalka lagala wareegay wuxuu ahaa Saalax Badbaado.” Ayuu yiri Xildhibaan Jeesow.
Saalax Badbaado oo ka tirsanaa Xildhibaanada Baarlamaankii KMG ee Dowladdii Shariif Sheekh Axmed, ayaa 10-kii bishii February ee sanadkii 2010-ka ku biiray Al Shabaab, waxaana Talaadadii la sheegay in uu ka mid ahaa xubnihii Al Shabaab ee isku qarxisay Garoonka Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho.
Title: Xildhibaan Jeesow oo sheegay lix bilood ka hor in Saalax Badbaado uu ku soo weeraray Gobolka Hiiraan..